သင့်မျက်နှာအသားအရည်ပေါ် ကို ဒါတွေ အမြဲ တင်မိနေပြီလား? – BaHuTuTa
သင့်မျက်နှာအသားအရည်ပေါ် ကို ဒါတွေ အမြဲ တင်မိနေပြီလား?
December 29, 2020 admin Beauty, Lifestyle 0
တစ်ခါတစ်လေ တစ်ချို့သောမိန်းမပျိုလေးတွေဟာ ကိုယ့်မျက်နှာအသားအရည်ကို ကိုယ်တိုင်ပဲဖျက်ဆီးနေမိတတ်ပါတယ်။မျက်နှာပေါ်မှာမလိမ်းသင့်တဲ့အရာတွေကို မသိပဲလိမ်းမိတာမျိုးပေါ့။ဒါကြောင့် ဘယ်အရာတွေကို မျက်နှာပေါ်မတင်သင့်ဘူး။မလိမ်းခြယ်သင့်ဘူးဆိုတာပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Body Lotion ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပဲသီးသန့်သုံးရတယ်ဆိုတာ သိတဲ့သူတော်တော်များများသိပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့တစ်လေကတော့မျက်နှာလည်းလိမ်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးလိမ်းကြတာတွေရှိပါတယ်။တကယ်တော့ မလိမ်းသင့်ပါဘူး။Body lotion ကို မကြာခဏမျက်နှာပေါ်လိမ်းမိနေရင် ချွေးပေါက်တွေပိတ်ဆို့လာနိုင်ပြီး ဝက်ခြံတွေ၊အမည်းစက်တွေ၊တင်းတိပ်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ဆပ်ပြာတုံးမဟုတ်ပဲ ကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာကို မျက်နှာအတွက်လည်းသုံးကြတဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသုံးကြတဲ့အခါမှာ မျက်နှာအသားအရည်က ပိုပြီးခြောက်သွေ့လာတတ်၊ယားယံလာတတ်၊ကြမ်းတမ်းလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မျက်နှာသစ်ဆေးသီးသန့်၊ဆပ်ပြာတုံးဆိုလည်း မျက်နှာအတွက် သီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ဆပ်ပြာတုံးကိုသာ သုံးပေးသင့်ပါတယ်။
သွားတိုက်ဆေးက ဝက်ခြံပေါက်တဲ့ အခါ တစ်ခါတစ်လေတို့သုံးတာပဲကောင်းပါတယ်။အမြဲတမ်းဝက်ခြံထွက်နေတဲ့သူတွေကတော့ သွားတိုက်ဆေးကို မျက်နှာပေါ်နေ့တိုင်းပုံထားလို့မရပါဘူး။အမြဲမျက်နှာပေါ်သွားတိုက်ဆေးပုံနေမယ်ဆိုရင် အသားအရည်ယားယံလာပြီး အရေပြားခြောက်သွေ့တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ချွေးပေါက် ပွင့်အောင်ဆိုပြီး ရေနွေးကိုသုံးကြတာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ရေနွေးက မျက်နှာပေါ်တင်လို့ရလောက်တဲ့အနေအထား ရေကြက်သီးနွေးရေလောက်ပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။အရမ်းပူနေတဲ့ရေနွေးကို သုံးမိမယ်ဆိုရင် အသားအရည်က ယားယံနီမြန်းလာပြီး သဘာဝအဆီတွေလည်းခြောက်သွေ့သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ်သုံးမယ့်ရေနွေးကို သေချာ အပူချိန်ဆန်းစစ်ပြီးမှသုံးသင့်ပါတယ်။
မျက်မှန်အမြဲတပ်ဆင်ရတဲ့သူဆိုရင် မျက်နှာတင်မက ကိုယ်အမြဲတပ်နေရတဲ့မျက်မှန်ကိုပါ သန့်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ညစ်ပတ်နေတဲ့မျက်မှန်ဟာသင့်မျက်နှာအရေပြားပေါ်ကို ဘတ်တီးရီးယားတွေချန်ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ဖုန်းလိုပဲ မျက်မှန်ဟာလည်း ဘတ်တီးရီးယားတွေအကြိုက်ပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ဒါကြောင့် တစ်ရက်ခြားတစ်ခါ ၊နှစ်ရက်ခြားတစ်ခါလောက် မျက်မှန်ကို ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆ ပ်ပြာနဲ့ ဆေးကြောပေးပြီး နူးညံ့တဲ့ဂွမ်းစဖြစ်စေ၊အဝတ်စလေးဖြစ်စေ ခြောက်အောင်သုတ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကော်ဖီ Scrub ၊ သကြား Scrub စသဖြင့် မျိုးစုံရှိပါတယ် ။လှချင်ကြတဲ့မိန်းမသားတွေဆိုတာလည်း ကိုယ့်မျက်နှာလေးလှပဖို့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးသုံးကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလို Scrub သုံးတဲ့အခါ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သုံးတာက ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ မျက်နှာအတွက်ဆိုရင်တော့ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါ၊နှစ်ပတ်ကို တစ်ခါလောက်ပဲ Scrub လုပ်တာကောင်းပါတယ်။ကိုယ့် မျက်နှာမှာအဖုအပိန့်တွေ၊ဝက်ခြံတွေမရှိဘူးဆိုရင် နှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ပဲ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ မျက်နှာအသားအရည်က နူးညံ့တဲ့အတွက် Scrub အမြဲလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အသားအရည်ကပိုပြီးခြောက်သွေ့ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။
အလှကြိုက်တဲ့ပျိုမေတို့အတွက် ဒါလေးတွေက သတိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခါးရိုးနဲ့ နောက်ကျော နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို သက်သာစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
ခြေသလုံးကြော တောင့်တင်း သူ များ ဒီ ( ၂ ) ချက် ဆောင် ရွက်ပေး ပါ ” ( ဆရာကြီး ဦးရန်အောင်)